Laacibkii hore ee Afrika oo u tartamaya Kursiga Madaxtinimada Liberia – Balcad.com Teyteyleey
Laacibkii hore ee Afrika oo u tartamaya Kursiga Madaxtinimada Liberia
Ciyaaryahan hore George Weah ayaa ka mid ah murcshaxiinta ugu xoogan ee u tartamaya kursiga madaxweynenimada dalka Liberia oo maanta loo dareeray.
2.1 milyan oo qof oo u diiwaan gashan inay codeeyaan, ayaa dooran doona madaxweynaha beddelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Africa.
Sirleaf ayaa xukunka ka dageysa kadib markii ay dhameysatay laba waqti oo min lix sano ah oo uu dastuurka dalkaas u ogolaanayo.
20-ka musharax ee ku loolamaya inay beddelan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Bokai, xiddigii hore ee kubadda cagta George Weah, hoggaamiyaha mucaaradka Charles Brumskine, iyo madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca Cola Alexander Cummings.
Kaliya hal haween ayaa u sharaxan madaxweyne, halka haweeney kale oo lagu magacaabo Jewel Howard Taylor, ay ku-xigeen ahaan ula ordeyso George Weah oo ka mid ah murashaxiinta haysta taageerada shacab badan.
Taylor waa xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaas iyo dagaal ooge Charles Taylor, oo lagu helay dambiyo dagaal oo ku saabsan inuu ku lahaa dagaalkii Sierre Leone.
Haddii musharaxna uusan ku guuleysan 50% codadka, sida la filayo, labada musharax ee ugu codadka badan, ayaa doorasho kala bax ah ku loolami doona bisha November.
The post Laacibkii hore ee Afrika oo u tartamaya Kursiga Madaxtinimada Liberia appeared first on Ilwareed Online.
Kooxo hubaysan oo weeraray Jaamacadda Magaaladda Mombasa iyo araday dhaawacantay.
Tirada cod bixiyeyaasha Somaliland oo la soo saaray (Akhriso)